UDana Drissel, uKaon oDibeneyo
Amanqaku ngu UDana Drissel
UDana Drissel sisicwangciso esiliqili sokuthengisa esikhethekileyo kwiinkqubo eziqhutywa ngumkhankaso ezitsala, zigcina kwaye zikhulise amathemba ngombhobho wentengiso. Okwangoku uMlawuli oyiNtloko weNtengiso ye Ukudibana kweKaonUcacise uphawu lwenkampani, wahambisa imilinganiselo esekwe kwi-ROI, kwaye wazisa iseti enkulu yezisombululo zeKaon, ekwakheni isiseko esikhula ngokukhawuleza sabathengi abakhokelayo kushishino kumacandelo ohlukeneyo eshishini.
Ikamva le-Utopian lokuThengisa iTshaneli
NgoMvulo, Agasti 4, 2014 NgoMvulo, Agasti 4, 2014 UDana Drissel
Amaqabane amajelo kunye nabathengisi bexabiso elongeziweyo (VARs) ngabantwana bomtshato wesibini ababomvu (baphathwa ngaphandle kwelungelo lobuzibulo) xa kufikwa ekufumaneni ingqalelo kunye nezixhobo ezivela kubavelisi beemveliso ezingenakubalwa abazithengisayo. Bangabokugqibela ukufumana uqeqesho kwaye abokuqala ukubekwa uxanduva lokuhlangabezana nezabelo zabo. Ngohlahlo-lwabiwo mali olunqongopheleyo, kunye nezixhobo zentengiso eziphelelwe lixesha, bayasokola ukunxibelelana ngokufanelekileyo ukuba kutheni iimveliso zahlukile kwaye zahlukile. Yintoni ukuThengisa kweShaneli? Indlela